Ubutofotofo obufihliweyo beGem, buGqibelele ukubaleka kwezothando - I-Airbnb
Ubutofotofo obufihliweyo beGem, buGqibelele ukubaleka kwezothando
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguĐana
Eli gumbi langoku kunye nobunewunewu lihlengahlengiswe ngokupheleleyo libe yindawo ephucukileyo yezibini ezithandekayo, okanye abahambi aba-2 abanomdla; unqwenela ukuqokelela amava amnandi kunye nokuzonwabisa, okanye ukonwabele nje ukutshona kwelanga kwibalcony yethu etshizwe lilanga.
Imi kwinxalenye esentshona yeHvar,
indawo ezolileyo kakhulu kodwa umgama kuphela 3 imiz ukusuka eyona iklabhu idumileyo beach "Hula Hula" , 10-15 min ukusuka kumbindi Hvar, kwaye kuphela 1 min ukusuka emarikeni, wow! Nceda, sinike ithuba ukwenza iiholide zakho zingalibaleki;)
I-Apartment Đana lifulethi elitsha, elikwindawo egqibeleleyo nethuleyo yedolophu iHvar.Ipatimenti yeyangoku kwaye ikhululekile, ihonjiswe kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo, ikhitshi, iTV yesathelayithi, imeko yomoya, ukungena kwi-intanethi ngaphandle kwamacingo, iLCD, njl. njl. kunye nokucoca kubandakanyiwe kwixabiso lokurenta. Kukwakho nendawo yokupaka yasimahla.
Ilungile kwaye ibekwe nje imizuzu emibini ukuhamba ukusuka kwezona lwandle zibalaseleyo ezineebhari ezininzi zolwandle kunye nezinye izinto ezininzi zokuzonwabisa kunye nemizuzu eyi-10-15 kuphela ukusuka kumbindi wakudala wesixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Đana
Sizama ukuba ngabamkeli abalungileyo kodwa singaphazamisi.Silapha ngenxa yakho nanini na usifuna.